सिम्रौनगढ नगरपालिकाको नगरसभामा किर्ते गरी १२ करोड हिनामिना गरिएको भन्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
सिम्रौनगढ नगरपालिकाको नगरसभामा किर्ते गरी १२ करोड हिनामिना गरिएको भन्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग
22 February, 2021 12:28 pm
काठमाडौं । बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका वडा नम्बर-४ का अध्यक्ष राजेश प्रसाद यादव र सोही नगरपालिका वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्ष हरिशंकर प्रसाद यादव र कार्यापालिका सदस्य परमाननन्द मुखियाले २०७७÷०७८ को नगरसभामा किर्ते गरि १२ करोड हिनामिना भएको भन्दै दोषीहरुमाथि कानूनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । नगरसभामा किर्तेगरि करोडौं हिनामिना भएको थाहा पाएपछि प्रहरीमा उजुरी पनि दिएको उनीहरुको भनाई छ । र, प्रहरीले उनीहरु (दोषी) लाई पक्राउ समेत गरेको उनीहरुले सुनाए । कार्यक्रममा बोल्दै राजेश प्रसाद यादवले भने,‘२०७७÷०७८ को नगरसभामा किर्ते गरेर हिनामिना गरेको छ । १२ करोड हिनामिना । गत असार ८ गते बसेको नगरसभामा ३१ जनाको उपस्थिति थियो, त्यसमा ५ जनाको हस्ताक्षर किर्ते छ । नगरसभा ६० जनामध्ये, ३१ जनाको पस्थिति थियो । त्यसमा पनि ५ जनाको हस्ताक्षर किर्ते गरिएको छ ।’
आफूहरुले यो थाहा पाउनेबित्तिकै प्रहरीमा उजुरी दिएको पनि उनले स्मरण गराए । उनले भने,‘सरकारी वकिलकहाँ फाईल गएको छ । बारा जिल्लामा गएर मुद्दा दर्ता हुनुपर्यो । हामीले त प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराएका छौं । तर, सरकारी वकिलले बदमास गरेकै छ ।’
उनले यो केशमा जिल्ला अदालतमा फाईल पठाएर मुद्दा दर्ता गराउन माग गरेका छन् । उनकाअनुसार नगरसभा सदस्य कपिलदेव साह, पानादेवी चमाई, रमावती कुशवाह, श्रीपती दुस्साधिन र रम्बा साहको नामको हस्ताक्षर किर्ते भएको थियो । उनले सिम्रौनगढ कार्यपालिकाका सदस्यहरुले ०७७÷५÷२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएको र २०७७÷९÷१९ गते किर्ते मुद्दा दर्ता गरेको जनाए । उनले भने,‘उनीहरुमाथि छलफल र अदालतमा फाइल पुर्याउनको लागि र कारवाहीको लागि यस कार्यक्रममार्पmत आग्रह गर्छौ ।’
उनले सिम्रौनगढ नगरपालिकामा विगतदेखिनै धेरै हिनामिना भैरहेको र नगरप्रमुखका कार्यकर्ताले आफ्नो मनपरि योजनालाई परिर्वतन गर्ने गरेको पनि टिप्पणी गरे । आफूहरुले नगर प्रमुखसँग हिसाब माग्दा नदिएर अदालत जान बाध्य बनाएको पनि यादवको भनाई छ । उनले यो विषयमा केन्द्र सरकारको संघीय मामिला मन्त्रालयको समेत ध्यानाकार्षण गराए । उनले नगरपालिकामा उपसचिवको दरबन्दी पनि खाली रहेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘त्यहाँका मानिसहरु रोएका छन् ।
सिम्रौढगढको किर्ते विषयमा यसको सत्य, तथ्य छानबिन गरि दोषीमािथ छिटोभन्दा छिटो कारवाही गरी पाउँ ।’ उनले बोर्डको निर्णय बिना १०० जना कर्मचारीको नियुक्ती भएको पनि आरोप लगाए । त्यस्तै, गाडी तथा जिन्सी सामान कति छ ? त्यो पनि एकिन नभएको भन्दै स्थानीय निकाय जनताको प्रिय हुनुपर्नेमा किन कर्मचारी भर्नामा लिप्त छ ? भन्दै उनले प्रश्न तेर्साए ।